“Cuntadii ayay ku qanci waayeen ka dibna rabshado ayay sameeyeen” | Somaliska
Magaalada Arboga ee gobolka Västmanland ayaa isbuucaan waxaa ka dhacay rabshad ay sameeyeen dadka ku jira kaamka soo galootiga ka dib markii ay ku qanci waayeen cuntadii loo dalbay. Magangalyo doonka ayaa la sheegay in ay xireen albaabkii laga soo galayay kaamka iyaga oo isticmaalaya kuraas.
Mid ka mid ah gacanyarayaasha kaamka ayaa warbaahinta u sheegay in koox yar oo ka mid ah dadka kaamka ku jira ay rabshado abuureen oo ay ka hor istaageen dadka kale in ay cuntada qaataan. Arinta ayaa markii dambe booliska loo wacay iyadoo ay u sheegeen in wixii dacwad ah ay u gudbistaan Laanta Socdaalka.
“Waxaan siinay shootbullar iyo baasto qamiistii. Jimcadii waxaan siinay hilibka haambeergarka. Waa cunto wanaagsan, kaasoo aan ka soo iibinay maqaaxi ku taala magaalada” ayuu yiri Tomas Hillberg oo masuul ka ah cuntada kaamka.
Qatar cunto aysan karsan baa lasiiyay ma iska cunaan
as waa ay ku saxan yihiin in ay diidaan waayo waxaa laga yaabaa in uu ku jiro hillib ama doofaar lamana cuni karo oo waa xaaraan hadday khudaar u keenaan waa caadi wayna cuni karaan.wa bi llaahi towfiiq
Walalo so lagama yabo inaysan Doofar kujirin balse köttbullar & Humburger aysan u aqoon cunno weyn ay cunan 🙂 Ileen waxa laga yaba inay caloshoda wax weyn baratay.. 😀 like somalida malin waliba Pasta or Baris oo qiyas laheyn 🙂 Haha
asc sln dhamaan Runtii aniga waxaan aaminsanahay iun dadka soo galootiga dhaqankooda iyo dabeecadooda tahay Qilaf iyo Dagaal hadii ey qabaab dood ku sabsab cuntada si aan dagaan aheen ayee ku gubi karaan . runtii aniga mid ayaan aaminsanahay hadii la dhahay wadaan waa xur ama xaquuda bini,aadaka ayuu ilaaliya macanheda ma ahin in ad XAARKA walaaqda . sharci iyo wado loo mara ayaa jirta Xaqaaga
Wasasa ani mariyan kufikrad ahay wa macqull in hilib doofaar kujiro cuntada wabilahi towfiiq
alla maxaa la kibray waa magan galya doon markaysay cunto ka cabanayaan doofaar maahe jir haddi loo keeno way ku qasban yihin wayo iyaga lugahooda wadanka ku yimi markaa hadalka ha yaraystaan
Asc, akhyaarta waxaan maqli jirey rootiga ninkii cuni lahaay lama siinin. Waxan ula jeedaa anaaba u dhaarsan alaabta meesha lagu soo qoree an lee ma isiiyaano.
Waa soo qaxdeen nabadgelyo iyo weliba cuntaa layskugu kiin daray taas beddelkeeda dagaalaaba la galooyaa ku lahaa, haddii saas dhan dagaal u rabtiin safka dagaalka inaad kasoo baxdaanba ma ahayn meeshaas aa ku nuureysiin saaxiibyaal ee iska noqda ku noqda meelahaad ka kala timaadeen abaal laawayaal yahow.
as walaal waan gaajoonayaa bakhtiga looma cuno anigu ma lihi dagaalama ama buuqbuuqa laakiin si duulamaasinimo ah sameeya dadkaan allaah baa noo sakhiray abaal weyn bayna inagu leeyihiin alle ha soo hanuuniyo haduu hanuun la maagay
way qaldanyihiin intay dad gurugood imaadeen oo cuno lasiiyay aya qaylinayaan walaahi waa arin ceeb ah in uu qof cuno u qayliyo
dadku wadanka waa yimaadeen dhamaanteen qof jeclaysanayo ma jiro in la siiyo wax uusan cunin balre rabshada ayaa ku qalad ah.
Maxa oo diiday si nathaam leh inay waxay diidan yehiin usheegen.
November 24, 2011 at 14:09
Runti koley waxbaa jira oo digsiga karka maxaa ka keena waa kuleylka. xanaaqa soomaali ayaan u nahay oo ma lala yaabaayo dhammaanteen waan is agnahay. kaam ayaad kadoodaysaan kuwa skolada dhigta ayaa qaati laga taganyahay maxaad ka sheegeysaa nin hada soogalay oo miskiin ah. marka waxaan dhihi lahaa iyagana wadankaan waa wadan dad leeyahay weyna idin soo dhaweeyeen inaad fahamtaana isku daya. waad mahadsantihiin webka.